Sidee lagu nadiifiyo vacuum shuqul caadi ah samayn? - Shiinaha Shandong Better Motor
The huufarka kuwa is-hoosaysiiya waa mid ka mid ah qalabka guriga lagu nadiifiyo handiest maanta loo isticmaalo. Its design weli wax ku ool ah oo fudud ayaa iska sameeyo isagoo si aad u nadiifiso Carro iyo qayb kale oo yar yar off sagxadaha by gacanta, oo waxay u jeediyeen guriga lagu nadiifiyo galay shaqo ku ool ah oo si caddaalad ah oo degdeg ah. ma aha waxaan nuugid Isticmaalka, vacuum iska whisks wasakh iyo waxa dukaamada qubo.
Sidaas daraaddeed sida geesiyaal qoyska, kuwaas oo u Shaqaysaa?
Habka ugu fudud si ay u sharxaan sida huufar nuugi karaan burburka waa in ay ka fekeraan waxa ka mid ah sida caws engegan oo kale ah. Marka aad qaadato kabasho oo ah khamri geey, tallaabada of caanonuug abuuraa cadaadiska hawada xun gudaha caws: cadaadis ah in ay ka yar tahay in of jawiga ku hareereysan. Sida filimada bannaan, halkaas oo la jebiyey godadka spaceship ee nuugayo dadka meel, huufarka abuuraa gudaha cadaadis xun, kaas oo keena socodka hawada u soo galay.
huufarka wuxuu isticmaalaa motor koronto in dhigeeysa taageere, jaqaan hawada - iyo wax kasta oo yaryar qabtay waxa ku jira - oo u riixaya soo baxay dhinaca kale, kiish ama koonbo weyn ah, si ay u abuuraan cadaadis xun. Waxaa laga yaabaa inaad u malaynaysaan in dhowr il biriqsi ah ka dib markii ay joojin lahaa shaqada, tan aad ku qasbi karaa oo kaliya hawada aad u badan meel go'doonsan. Si taas loo xaliyo, vacuum leeyahay dekedda dhammayn in saaraa hawada soo baxay dhinaca kale, jidaynayey motor ah in ay sii wadaan si caadi ah u shaqeynaya.
hawada, si kastaba ha ahaatee, ma aha oo kaliya dhex mari iyo get saaray soo baxay dhinaca kale. Waxa ay noqon doontaa mid aad u halis u ah dadka oo isticmaalaya vacuum ah. Waa maxay sababta? Well, on top of the wasakh iyo wasakh in vacuum ah diiro, waxa kale oo ururiya qayb aad u wanaagsan in ay yihiin ku dhowaad aan la arki karin in ay isha. Haddii ay neefsado in tiro ku filan oo waaweyn, waxay keeni karaan waxyeelo sambabada. Tan iyo markii aan dhan qayb ka, kuwaas oo ku xayirmay bacda ama koonbo weyn, huufarka waa soo gudubtaa hawada iyada oo ugu yaraan hal filter wanaagsan iyo inta badan HEPA (Karti Sare Particulate xireen) filter a in ku dhowaad dhammaan of ciidda ka saar. Kaliya hadda waa hawada ammaan in la mar kale ku neefsaday.
Awooda huufarka la go'aamiyo ma ahan oo keliya by xoogga ay motor, laakiin sidoo kale size ee dekedda qaadashada, qayb ka mid ah in kor u nuugayo uus. size yar ee la qaato, iyo xoogga nuugid dheeraad ah ahbaa, sida Tuujiya tiro la mid ah hawada iyada oo loo marayo waddo cidhiidhi macnaheedu waa in hawada waa guurto si dhakhso ah. Tani waa sababta in vacuum nadiifiye ku lifaaqan la cidhiidhi ah, dekedaha entry yar u muuqdaan in ay leeyihiin nuugid ka badan ka badan hal weyn.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan huufarka, laakiin dhan oo iyaga ka shaqeeyaan on mabda'a isku mid ah abuurista cadaadis xun isticmaalaya taageere, xannibay uus nuugo-up, nadiifinta hawada qaaca ka dibna u sii daayo. uu adduunka ahaan lahaa meel badan dirtier iyaga oo aan.